အချို့မူထူးခြားတဲ့ features တွေနှင့်အတူတစ်မူထူးခြားတဲ့အွန်လိုင်းအွန်လိုင်း slot ကဂိမ်း, လှုပ်ရှားမှုဘဏ်အွန်လိုင်းအစစ်အမှန်ပိုက်ဆံအနိုင်ရမယ့်ကြီးမြတ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်. လောင်းကစားသမားတွေ slot ကဂိမ်းထဲမှာဂန္ထဝင်ဆောင်ပုဒ်ကိုချစ်, ဒါပေမယ့်အားလုံးဂန္ရေးရာအွန်လိုင်းမိုဘိုင်း slot နှစ်ခုတိုးတက်သော slot နှစ်ခုရှိပါတယ်. ယင်း၏ဆုကြေးငွေ features တွေကစားသမားကြီးမားသောအနိုင်ရကူညီပေးနိုင်ပါသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Barcrest လှုပ်ရှားမှုဘဏ်မိတ်ဆက်အားဖြင့်ကြီးစွာသောအလုပ်အကိုင်အပြုတော်မူပြီ.
ဒါဟာငါး reel ဖြစ်ပါတယ် 20 အချို့သောစိတ်ဝင်စားဖို့သင်္ကေတများ featuring ကြောင်း betline အွန်လိုင်း slot ကဂိမ်း. လောင်းကစားသမားတွေကအတော်လေးကြောင့်ဂရပ်ဖစ်၏နှစ်သက်ဖွယ်နှင့်ဂီတ၏အသံအရည်အသွေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်. ပြီးပြည့်စုံသောလောင်းကစားဝိုင်းကို manual မျက်နှာပြင်ရဲ့ဘေးထွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပေးထားနှင့်လည်း Auto-ကစား option ကိုတပ်ဆင်ထား.
လှုပ်ရှားမှုဘဏ်အဓိကအားဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သင်္ကေတ၏လောင်းကစားသမားတွေဆွဲဆောင်. ဒီဂိမ်းသုံးခုအဓိကသင်္ကေတများရှိပါတယ်, နီသော 7, X နှင့်ဘား. ဤရွေ့ကားသင်ချည်ငင် reels အပေါ်မြင်ရပါလိမ့်မည်ကြောင်းသုံးသင်္ကေတများဖြစ်ကြသည်. သင်တို့သည်လည်းအမြားအပွားအဖြူရောင်စက်ဝိုင်းဆင်းသက်နိုင်ပါတယ်, သင်မူကားမဆိုဆုချီးမြှင့်ဆုချမည်မဟုတ်. ဒီဂိမ်းနှစ်ခုအရေးကြီးသောသင်္ကေတအဆိုပါ Joker များမှာ, ရိုင်းသင်္ကေတနှင့် The ရွှေ Vault, ကြဲဖြန့်သင်္ကေတ. ဤအခြို့သောကြီးတွေကိုအနိုင်ပေးနှင့်ဆုကြေးငွေ features တွေနှင့်အတူသငျသညျပေးနိုငျသောကွောငျ့တတ်နိုင်သမျှအကြိမ်ပေါင်းများစွာအဖြစ်အဲဒီနှစျခုသင်္ကေတများဆင်းသက်ဖို့ကြိုးစားပါ.
အဆိုပါဂိမ်းချောချောမွေ့မွေ့ပြေးကြောင့်ကြီးမားပြီးသေးငယ်တဲ့နှစ်ဦးစလုံး screen များအတွက်စုံလင်သည်. သငျသညျအခြားအွန်လိုင်းမိုဘိုင်း slot နှစ်ခုကဲ့သို့တူညီသောလမ်းထဲမှာဆော့ကစား, ဒါပေမယ့်ဆုကြေး features တွေလှုပ်ရှားမှုဘဏ်နှင့်အခြားအွန်လိုင်းအွန်လိုင်းမိုဘိုင်း slot နှစ်ခုအကြားအဓိကကွာခြားချက်ဖန်တီး.
ဒါဟာအနီရောင် 7s ၏ဆင်းသက် sequence ကိုအချို့သောအထင်ကြီးတိုးပွားစေဝင်ငွေအတွက်သင်ကူညီနိုင်သည်ကိုသိရန်ဒါခက်ခဲတဲ့မဟုတ်ပါဘူး. သင်သည်သင်၏ stacked ပမာဏ၏ 500x အထိအနိုင်ရနိုင်ပြီးကြောင်းသင်တို့အဘို့အကာအထင်ကြီးအနိုင်ရပါလိမ့်မယ်. အဖြူရောင်စက်ဝိုင်းဂိမ်းရွှေစက်ဝိုင်းသို့လှည့်သောအခါကဖြစ်ပျက်နိုင်ပါတယ်, သငျသညျအခြို့သောပိုပြီးတိုးပွားစေရ.
အခမဲ့လှည့်ဖျားအင်္ဂါရပ်ကိုအရပ်ရပ်ကွဲပြားစေအပေါ်မူတည်. ငါးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြဲဖြန့်သင်္ကေတများလေယာဉ်ဆင်းသက်သင်တို့အဘို့အခမဲ့လှည့်ဖျားအင်္ဂါရပ်ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်. ဒါကြောင့်အခြားအွန်လိုင်းမိုဘိုင်း slot နှစ်ခုအတွက်မအဖြစ်ရိုင်းသင်္ကေတတူညီသောလမ်းအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်. ဒါဟာပိုကောင်းတဲ့ကအနိုင်ဂိုး sequence ကိုဖန်တီးအခြားသင်္ကေတများနေရာတွင်အစားထိုးပါလိမ့်မယ်.
လှုပ်ရှားမှုဘဏ်တစ်ကောက်ပတ်ပတ်လည်ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းကြောင့် Big ဘဏ်ဆုကြေးငွေအင်္ဂါရပ် features. သငျသညျစိန်ထံမှတဦးတည်းရဲ့သင်္ကေတကောက်လို့ရပါတယ်, အချို့သောပိုပြီးတိုးပွားစေဝင်ငွေပတ္တမြားသို့မဟုတ်နီလာ.
လှုပ်ရှားမှုဘဏ်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်အများကြီးဘို့ပြီးပြည့်စုံအွန်လိုင်း slot ကဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. ဒီဂိမ်းရှိပါတယ် 95.16% RTP နှငျ့သငျဆက်ဆက်အနိုင်ရပေါင်းစပ်လေယာဉ်ဆင်းသက်ခြင်းဖြင့်ထီပေါက်အနိုင်ရနိုင်ပါတယ်.